Soo-saaraha Beerta Shiinaha Shiinaha iyo Alaab-qeybiye | OBeer
Magaca badeecada: 500L Brewer Brewer
Badanaa waxaan isticmaalnaa taangiga sare ee naxaasta ah, gudaha wali waa SS304 ama walxaha SS316 si loo sameeyo haanta biirka.
500L Taangiga Lauterka
Tuner lauter waxaa loo isticmaalaa shaandheynta iyo cadeynta dareeraha sonkorta (oo loo yaqaan wort) oo ka soo baxa biyo kululeeyaha kululeeyaha (oo la yiraahdo mash) oo ka yimaada tuugista Waxay leedahay naqshad hoose oo been ah oo ka sameysan birta-birta ah ee birta ah iyo qalabka wax lagu xiro ee leh shaqadda kiciyaha, raajada iyo ka-qaadista faa'iidada badan. Tani waa aalad aad u gaar ah oo waxtar leh maxaa yeelay ka dib marka la sifeeyo miraha la isticmaalay ayaa laga saari doonaa tuubada, taas oo waqti iyo tamar badan ku badbaadinaysa aaladda.
500L Jilibka karkaraya / Whirlpool tun
Ka dib naas-nuujinta, biirka wort-ka waxaa lagu kariyaa hilqado (iyo dhadhan kale haddii loo isticmaalo) haanta loo yaqaan 'kettle / Whirlpool tun'. Nidaamka karkarinta ayaa ah halka falcelinta kiimikada iyo farsamada ay ka dhacdo, oo ay ku jirto jeermiska jeermiska ee loo yaqaan 'wort' si looga saaro bakteeriyada aan loo baahnayn, sii deynta dhadhanka hop, qadhaadhka iyo urta udgoon iyada oo loo marayo isomerization, joojinta hababka enzymatic, roobka borotiinka, iyo uruurinta jihada.
Nidaamka Mashing Masaxa 2.500L
*Dusha sare: Copper, TH: 2mm;
Dusha sare: SUS304, TH: 3mm. Dhexdhexaadinta xirxirida gudaha.
* 20% ~ 30% booska madaxa
* Nadiifinta: dhogorta dhagaxa ah
* Dhumucdiisuna waxay daaha insulating: 80mm
* Dhumucda gudaha: 3mm, dhumucda Dibadda: 2mm
* Kuleylka: Uumiga, Korontada ama dabka tooska ah.
* Qalalaasaha farsamada iyo nidaamka raker: xakamaynta soo noqnoqoshada
* Manway korka saaran, muraayadda aragga ikhtiyaari ah
* Nadiifinta: 360°kubad nadiifinta buufin Rotary
* Qeybta hoose ee beenta: Dabaqa Beenta ah ee V-Wire oo lagu daray Lauter Tun - wuxuu si dhab ah u damaanad qaadayaa socodka wort ee joogtada ah
* Heer dareere ah oo leh tuubbo isku xirka cabirka
* Kumbiyuutarka tubbada tubbada ee weelka
* Nalalka iftiinka LED
* Thermowell heerkulka, PT100 Baaritaanka Heerkulka.
* Sare loo qalay, xagal dhudhunka hoose 140 °.
* Isku darka amaanka.
* Ilaalinta dusha sare ee saxanka, xarig lagu xardhay walxaha.
* Taabashada shaashadda iyo barnaamijka PLC
* Semi otomaatig ah ama si otomaatig ah kontoroolka elektarooniga ah ama pneumatic buttlefly
* Ahama madal brewing steel & jaranjarada isku dhafan ama jaranjaro leh suufka cagta hagaajin karo, waayo, barxadda
* Iyada oo leh dhamaan filtarka iyo qalabka ku habboon.
* Taangiyada biyaha kulul iyo taangiga biyaha qabow ee ikhtiyaariga u ah iskudhafyada gaarka ah
Fadlan xor u la xiriir wixii faahfaahin dheeraad ah !!
Hore: Nidaamka halsano
Xiga: Qaybta 'Brewhouse & Mash'
5000L afar markab oo lagu kariyo: mash, haanta lakabka, ...
500L Nidaamka Diyaarinta Steam
Daasadaha Beer mashiinka buuxinaya
Nidaamka biraha 500l ee biirka Pub & Bar & ...
8000L afar markab oo lagu kariyo: mash, haanta lakabka, ...
500L Nidaamka Soo Saarida Kuleylka Korantada